ISpar Proteas ithwele amathemba ezwe | Bayede News
Home/ Ezemidlalo/ISpar Proteas ithwele amathemba ezwe
Abadlali beSpar Proteas
Kulindeleke ukuba lenze kahle elomqakiswano libuyise nethemba kubathandi bezemidlalo eNingizimu Afrika.
UNYAKA omkhulu lona eNingizimu Afrika kwezemidlalo, emveni kweBanyana Banyana ibidlala iNdebe YoMhlaba okukuqala yangenza kahle ihlulwa yonke imidlalo neProteas engenzanga kahle ephume zibekwa emidlalweni yeNdebe YoMhlaba eqhubeka e-England. Amathemba abathandi bezemidlalo alele eqenjini lebhola lomqakiswano iSpar Proteas ukuthi lenze kahle kule Ndebe YoMhlaba eqala namhlanje. Elakuleli lidlala neTrinidad & Tobago eM&S Bank Arena eLiverpool emdlalweni wokuvuka namuhla.
Ahambe kahle amalungiselelo eNdebe yoMhlaba eSpar Proteas emveni kokuzidlela amahlanga kuWales. ISpar Proteas sidlale imidlalo embili neWales njengengxenye yokuzilungiselela iNdebe YoMhlaba, ngoLwesine zizine kuNtulikazi emdlalweni wokuqala linqobe ngamaphuzu ama-84 kwangama-32, ngoLwesihlanu 5 kuNtulikazi emdlalweni wokugcina liqhubeke laligcine khona linqoba ngamaphuzu angama-79 kwangama-44, yomibili le midlalo yadlalelwa eViola Arena eWales.
Ukudlala kahle kweSpar Proteas kuboniswe nawukuklonyeliswa kukaShadine van der Merwe njengomdlali ovelele kulolu chungechunge lwemidlalo.
Ukwenza kahle kweSpar Proteas kubuyisa ukuzethemba eqenjini nasesizweni. Okunye okuzogqugquzela leliqembu okuthi lenze kahle imivuzo elizoyithola uma lenza kahle ezonikezelwa uSpar.
USpar uthe uzonika leli qembu isigidi esisodwa uma ngabe benganqoba iNdebe YoMhlaba, ubanikeze amakhulu ayisikhombisa namashumi ayisihlanu umangabe bephuma endaweni yesibili, ubanikeze izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu umangabe bephuma endaweni yesithathu.
ISpar Proteas siseqoqweni neTrinidad & Tobago ekeliswe endaweni endaweni yeshumi emhlabeni, neJamaica ekeliswe endaweni yesibili emhlabeni, neFiji ekeliswe endaweni yeshumi nesikhombisa emhlabeni.
Amanye amazwe azobe emele izwekazi i-Afrika i-Uganda ekeliswe endaweni yesithupha emhlabeni, izothembela kukaputeni uPeace Proscovia odlalela iqembu iSunshine Coast Lightning yase-Australia. Le ntokazi yayingukaputeni weqembu linqoba i-African Netball Champions ngowezi-2017.
IMalawi ingena kulomqhudelwano ihleli endaweni yesishiyagalolunye ekuklelisweni kwamazwe, izobeka amathemba ayo esihlabanini uJoyce Mavula odlalela iManchester Thunder yase-England, le ntokazi yoklonyeliswa ngendondo yokuba ngumdlali wonyaka ngenkathi iqembu lakhe linqoba iVitality Netball Superleague kuNhlaba.
IZimbabwe ezobe idlala okokuqala kuNdebe YoMhlaba ikleliswe endaweni ye-13 emhlabeni, izothembela ku-Adelaide Muskwe oneminyaka engama-20 odlalela iSevern Stars yase-England ukuba alisize lenze kahle.
ISpar Proteas neTrinidad & Tobago eM&S Bank Arena (Court 2) ngehora le-17:25
IZimbabwe neSri Lanka eM&S Bank Arena (Court 2) ngehora le-11:25
IMalawi neNew Zealand eM&S Bank (Court 1) ngehora le-09:00
I-Uganda neEngland e eM&S Bank Arena (Court 1) ngehora le-19:00